Qaamuuska Instagram ▷ ➡️ Kuwa raacsan ▷ ➡️
March 15, 2021 0 comments 944
Haddii aad isticmaaleysid shabakaddan bulshada waxaad ogaan doontaa in waqti ka waqti shuruudaha cusub ay soo baxaan tibaaxaha, xadaaradda caanka ah iyo shuruudaha moodada.
Taasina waa sababta qaamuuska qaamuuska ah ee Instagram aad u fahmi doonto waxa mid kasta oo ka mid ah tibaaxaha lagu xusay maalin walba looga jeedo aaladdan weyn ee sawirrada iyo fiidiyaha. Xaqiiqdi waligaa waxay kugu dhacday adiga oo aadan fahmin daabacaad gaar ah ama mowduuc soo baxaya, hadda waxaad xallin doontaa shaki kasta oo aad qabto.
Halkan waxaad ka heli doontaa ereyada aasaasiga ah ee Instagram, ereyada ugu isticmaalka badan, hashtags fashion y dhammaan shaandhooyinka instagram Midba mid buu u sharaxay.
1 Erayada aasaasiga ah
2 Dhamaan caan ka ah Hashtag on Instagram
3 Xashiishka caanka ah ee caanka ah
4 Miirayaasha Instagram
Erayada aasaasiga ah
Astaan ​​shaqsiyeed: Tani waa aqoonsigaaga oo ka kooban magacaaga, sharraxaad kooban oo taariikh nololeed iyo sawir.
Daabacadaha: dhamaan sawirada iyo fiidiyowyada aad geliso shabakada bulshada.
Followers (Kuwa raacaya): Isticmaalaha raacaya waxqabadkaaga (daabacaadaha) oo ku arka waxqabadkaaga shabakadda.
Saameeyayaasha: adeegsadayaasha leh dad badan oo raacsan oo leh xoogaa kalsoonaan ah oo sababa is-dhexgal badan oo qoraaladooda ah.
La Soco: Isticmaalayaasha aad go'aansato inaad raacdo sabab kasta awgeed.
comments: qayb ka mid ah qoraalka aan u qorno cinwaanka hoose ee daabacaadda.
jecel yahay: nidaamka isdhaafsiga si aad u muujiso xiisahaaga ama aad ugu qanacsan tahay daabacaadaha.
Baadh: waxqabadka raadinta ee kuu oggolaanaya ka hel isticmaale kale barta Instagram (profiles).
Magaca sumadda (@ calaamad): sheeg isticmaale qoraal gaar ah. Markaad qorto magaca qofka calaamaddiisa kadib waxaad si toos ah u magacawdaa.
#hashtag instagram: waa astaamo kooxeed ujeedo leh si loo garto waxa ku jira.
Tusaale ahaan, markaad geliso #dog waxaad cadeyneysaa in sawirka ama fiidiyowgu ay iska leeyihiin kooxdaas, marka isticmaaleyaasha kale ay isticmaalaan isla sumadda, waxa ku jira ayaa lagu soo qotomaa hareeraha haashta.
Isticmaalayaasha ayaa raadin kara xirmooyin khaas ah si ay u ogaadaan waxa ku jira.
Miirayaasha: Shaki la'aan howsha ugu caansan ee madasha, waxay u adeegaan dib-u-habeynta iyo tafatirka sawirada ka hor intaadan daabicin. Waxaad leedahay shaandhooyinka 23, marka lagu daro xirmooyinka iyo saameynta kale ee cajiibka ah. Waxaan sharraxaa dhammaan shaandhaynta loogu talagalay shaashadda hoose.
Dir toos ah: Waa hawl kuu oggolaanaya inaad sawirro gaar ah u dirto hal ama dhowr adeegsadeyaal. Hagahan waxaan si faahfaahsan ugu sharixi doonaa waa maxay toos Instagram iyo sida loo istcimaalo
Dhamaan caan ka ah Hashtag on Instagram
Ereygan waa mid aad u caan ah maadama in kabadan 1 Million oo sawirro ah lagu sumeeyay hashtaggan. Adeegsadayaashu waxay u isticmaalaan inay ku sawiraan sawirro duug ah oo kuwii hore waxaana caadi ahaan loo adeegsadaa khamiista toddobaad kasta.
Muujinta Ingiriisiga waxaa loola jeedaa Tuurba tuurida wuxuuna dhiirigeliyaa daabacaadda sawirrada carruurnimada, daqiiqado taariikheed oo shakhsi ah iyo wax kasta oo la xiriira wixii la soo dhaafay. Halkan waxaad ka arki kartaa faahfaahinta Waa maxay micnaha hashtag #tbt
Calaamaddaan ayaa bilaabaneysa inbadan oo la adeegsado waxayna tilmaamaysaa waxa ku jira daabacaadda Jimcaha. Asal ahaan waa sida lagula taliyo jimcaha dadka kale ama qorshe xiiso leh oo qof ka hadlay.
Soo koobaya ereyga Ingiriisiga "Naag Burbur ArbacoWaana la adeegsadaa Arbacada. Isticmaalayaasha ayaa wadaaga sawirada haweenka jecel, laga soo bilaabo hooyo, ina-adeer, jilaa, fannaaniin, ayeeyo ayeyn u tahay halyeeyga weyn ee shaashadda.
Iyada oo in kabadan 130 milyan oo dhejin oo ah sumaddan ayaa ah mid aad loo jecel yahay isla markaana adeegsadayaashu si isdaba joog ah ayey u adeegsadaan. Waxaa loola jeedaa "La soco si aad ula socoto"Oo macno ahaan macnaheedu yahay" i raac oo waan ku raacayaa ", dadka isticmaala internetka ayaa u isticmaala raac raac raac Instagram-ka si dhakhso ah oo bilaash ah Isla markiiba
Ingiriisiga waxaa loola jeedaa "Dameerkeyga waan kaftamayaa ” iyo tarjumaadda xun ee xun ayaa noqonaysa "kala-goyskayga isha" ama "qosol dhimanaya".
Sidaad u maleyneyso inaad qiyaastay, sumaddan waxaa loo isticmaalaa waxyaabo ka qosol iyo madadaalo leh. Inbadan oo kamid ah daabacadahaani waxay kudhamaadaan ifafaalo faayras, sidaa daraadeed adeegsadayaashu waxay saaxiibbadood kula wadaagaan #LMAO si ay uga dhigaan qosol.
Sida magaceedu u muujinayo Petstagram waxaa loo isticmaalaa in lagu calaamadeeyo xayawaanka. Baadhitaan ku samee haashkan caanka ah waxaadna arki doontaa in kabadan 27 milyan oo fiidiyoow ah iyo sawirro bisadaha, eeyaha, hamster iyo bakaylaha.
Ereygan ayaa sidoo kale loo yeedhay Dib u dhigis o shidaal Waxay u dhigantaa wadaagista Facebook ama dib ugu soo dhigto Twitter. Isticmaalayaasha ayaa dib ugu daabacaya ama la wadaaga waxyaabaha kale ee dadka ku jira boggooda gaarka ah, laakiin waa inaad had iyo goor sheegtaa qoraaga iyo isha asalka ah.
Waad baran kartaa sida loo sameeyo dib u soo dhig bogga Instagram si fudud oo dhowr qalab ah, xitaa kombuyutarkaaga.
Iyada oo la adeegsanayo malaayiin 9 ah oo daabacan hashtag-ka ayaa loo isticmaalay in lagu qaato is-miidaaminta Axadaha. Isticmaalayaasha ayaa sawirro iska qaadaya isla markaana ku dhejiya calaamadahan, inkasta oo maanta la isticmaalay iyada oo aan loo eegin inay tahay Axad ama maalin kale oo toddobaad kasta ah.
Ingiriisiga waxaa loola jeedaa "Sawirka Maalinta" oo adeegsadayaashu waxay u isticmaalaan inay ku daabacaan sawirkooda ugu wanaagsan ee maalinta.
Maaha waxa ay umuuqato, ereygan macno ahaan waxaa loo tarjumay "cunsur aan la aqbali karin oo cunno cunista" markay arkaan. Waad hore u qiyaasi kartaa nooca noocee ah ee malaayiin 129 ah oo kooxdan sumadda caanka ku ah, waxaan kugu casuumay inaad fiiriso.
Ereygan wuxuu leeyahay adeeg u eg midka kor lagu soo sheegay. #POTD iyo tarjumaaddiisu waa Naxwaha maalinta”, Kaas oo sidoo kale ah daabacaadda ugu wanaagsan ee maalinta.
In kabadan 188 milyan oo sawirro ah ayaa loo calaamadeeyay muujintaan waxaana loo isticmaalaa in lagu muujiyo niyaddaada. Isticmaalayaashu waxay soo geliyaan fiidiyoow "muuqaal ah" ama sawir oo ay weheliyaan sharraxa sharxaya xaaladdooda.
Haashtaan hadaba waxay leedahay 135 malyan oo post, iyo Ingiriisiga micnaheedu waa "Dharka maalinta". Tarjumida ayaa noqon laheyd "Dharka maalinta" waxaana si ballaaran loogu adeegsadaa akoonnada mareegaha wax ku qora, saameeyayaasha iyo dadka jecel moodada. In kasta oo dad badani u isticmaalaan in ay ku tusaan dharka ay xidhaan iyo waxyaabaha kale ee ay xidhan yihiin. Waxaa sidoo kale loo yaqaan Xashiishka dharka
Xashiishadani waxaa abuuray bulsho aad u fara badan oo macallimiin ah kuwaas oo go’aansaday inay taageeraan oo ay wax bartaan kuwa ugu quruxda badan sawirrada adduunka.
Waxaa sidoo kale loo yaqaanay "Qoyska caalamiga ah"Xitaa waxay lahaayeen degel ay iyagu iska leeyihiin, laakiin hadda ma ahan mid ansax ah oo dhammaan noocyada dadku waxay u isticmaalaan inay ku sawiraan sawirkooda maalinta.
Summad si dhakhso leh u koraya sababtuna tahay kororka howlaha jimicsiga. Waxaa loo istcimaalayaa in lagu dhejiyo dhejimaha dadka jimicsiga, miisaanka oo yaraada, caadooyinka caafimaadka leh, cuntada caafimaadka leh iyo wax kasta oo laxiriira jimicsiga. Waxaa jira in kabadan 45 milyan oo sawirro ah oo la sumadeeyay waxayna sii wadaysaa inay sii kordho maalin kasta.
Ingiriisiga waxay ku timaadaa in la yiraahdo Madaxa rux " iyo tarjumaadda macnaheedu waa "waalasho" (madaxa rux). Waxaa la isticmaalaa marka daabacaaddu ay tahay mid naxdin leh, qosol leh ama wax aan sharxi karin.
Waxay fulisaa isla howlihii #F4F iyo macnaheedu "Like like like", taasi waa, isweydaarsiga isdhaxgalka bulshada si aad u hesho jecleysi badan boostadaada. Waxay sidoo kale ku raaxeysataa caansan caan ah oo leh in kabadan 130 malaayiin sawirro ah oo la soo galiyay.
El macnaha LoL Way kala duwanaan kartaa iyadoo kuxiran xaaladda. Waxay noqon kartaa ciyaarta RPG-ga caanka ah (League of Legends) ama muujinta Ingiriisiga ee cod dheer kor loogu qososho.
Waxay ka timid muujinta Ingiriisiga "Man burburi Isniinta" waana isku mid sida sumadda #wcw laakiin ragga, inkasta oo haddii aad fiiriso aad xaqiiqsanayso in sawirro badan oo haween ah la soo geliyey marka loo eego ragga.
Xarfahaas oo Ingiriis ah ayaa loola jeedaa "Madoow iyo Caddaan" (Madoow iyo caddaan), sidaa darteed adeegsadayaashu waxay soo geliyaan sawirro leh miirayaal madow iyo caddaan ah iyagoo ku ururinaya summaddan.
Hadda waxay noqotay mid moodada ah in la sawiro sawirada bilaa miirayaasha. Tan darteed, isbeddelkan ayaa loo abuuray halka isticmaaleyaasha iyada oo loo adeegsado hashtag ay sawirro ku dhajistaan ​​iyaga oo aan adeegsanin nooc filter oo caadi ahaan la socda Instagram.
Xashiishkan ma ahan sida caan ah (Sawirrada 240k la galiyay) laakiin waxaan doonayay inaan magacaabo. Micnaheeda Mashruuca Hashtag ee Toddobaadka ” waana tartan ay Instagram diyaarisay waqti ka hor wiig kasta usbuuca halkaas oo uu ku casuumay adeegsadayaasha inay soo geliyaan sawirro qurux badan.
Haddii aad rabto isticmaal sheekooyinka Instagram Waxaad u adeegsan kartaa waxyaabo badan oo ka mid ah qodobadan si aad u abuurto isku-duwayaal gaarayo adeegsadeyaal badan isla markaana saameyn ku leh dhagaystayaasha.
Xashiishka caanka ah ee caanka ah
Ka sokow magacyada aan magacaabay, waxaa jira kuwa kale oo isbeddelaya oo aan joojinaynin kobcinta, taasi waa, iyagu maahan kuwo taagan sida kuwa kale ee tartiib tartiib u joojinaya in la isticmaalo.
Caadi ahaan, ereyada noocaan waxaa sameeya halyeeyada, dadka caanka ah, saameyn weyn ku leh, dadka wax qora, maamulayaasha iyo magacyada badanaa.
Ereygan wuxuu caan ka noqday adduunka oo dhan, xitaa kahor Instagram. Waqtigaan la joogo waad garan doontaa waxa loola jeedo, sawir ka qaad mobiilkaaga ama Tablet naftaada. Shabakada bulshada dhexdeeda waxaa ku jira inka badan 310 milyan oo isticmaaleyaal ah kuwaas oo daabaca naftooda.
Xaqiiqdii, mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee ku dhici doona farcanka dambe, ayaa ah midka lagu sameeyay Oscar gala ee 2014. Twitter hore ayaa loo wadaagay in ka badan 1 milyan jeer oo kaliya 50 daqiiqo ka dib markii la daabacay.
Sida xaqiiqooyinka cajiibka ah, ereyga sanadka ee 2013 waxaa doortay qaamuuska Oxford oo waqtigaas laga bilaabo shirkadaha mobilada waxay hagaajiyeen xallinta kaamirooyinka hore, marka lagu daro isku daridda tooshka iyo alaabada badan.
Ereygan wuxuu bilaabay mid xoog badan, laakiin waxay umuuqataa inuu dhibaatooyin badan kala kulmay shabakada bulshada. Waxay ku saabsan tahay soo qaadista sawirrada badhanka, badhida iyo muujinta dhabarka. Isticmaalayaashu waxay ku sawiraan sawirradan iyagoo wata qoraallo kooban, qodaxyo, fareemyo iyo xitaa hawo.
Mid ka mid ah wadayaasha ayaa Kim Kardashian u sheegay sawirradeeda hortiisa muraayadda laba-geeska ah.
Waxay u egtahay shuruudaha hore waxayna ka kooban yihiin sawir qaadista timahaaga iyo timahaaga. Waxaa sidoo kale la aqbalay qaamuuska Oxford iyo jilaayaal badan iyo moodallo ayaa taageera oo dhiirigeliya daabacadahaas.
Tusaale ahaan, Jessica Alba waxay taageere u tahay inay sawiro ka qaadato timaheeda, sidaa daraadeed ereygu wuxuu helayaa tixgalin badan.
Xashiishaddan waxaa loo isticmaalaa marka la qaadayo sawiro kooxeed, in kasta oo si fudud loogu khaldami karo # Selfie.
Maaha sida caan ah, laakiin sidoo kale waxaa loo adeegsaday wakhti gaaban. Isticmaalayaashu waxay soo geliyaan sawirro naftooda ay sakhraansan yihiin, laakiin dadka caqliga lihi ma taageeraan ereyadan ay ku dhammaadaan adeegsiga, marka lagu daro sawirrada naxdinta leh ee ay soo geli karaan.
Wuxuu lahaa caan ah, laakiin in yar in yar ayuu adeegsaday, waa kuwan gudbinta faashshka ee hashayaasha. Waa run in waqtiga xagaaga uu xoogaa xoogaa ka dhexeeyo isticmaaleyaasha.
Waxay ku saabsan tahay gelinta sawirada sawirada ee bikini, wax ka yar ama ka badan oo soo jeedin ah, laakiin muujinaya booska loo abuuray sinta sinta. Xaqiiqdii, tarjumaadda rasmiga ahi waa "buundada bikini."
Waxay yeelatay saameyn xun maxaa yeelay waxay soo jeedin kartaa khafiifnimada haweeneyda waxayna abuuri kartaa qaylo dhaan bulsheed oo mataleysa jirka jir qurux badan oo ku xiran culeyska jirka.
Sida magacu u muuqdo waxay ku saabsan tahay sawir qaadista isla marka aad ka soo tooso sariirta, inkasta oo ay tahay inay noqdaan kuwo dabiici ah intii suurta gal ah.
Fannaanadda Beyoncé ayaa iyaduna sawirkeeda ku biirisay kaqeybqaadashada dhacdadan oo sidoo kale lumisay muhiimadda ay ku leedahay Instagram.
Tarjumaadda rasmiga ahi waa "ficilka kadib" oo taa ku saleysan, gal sawirro kadib markaad ficilka sameysay, in kastoo hadaad sahamiso kanaalka halka ereygu ka muuqdo waad heli doontaa wax walba.
Miley Cyrus ayaa sidoo kale ka qayb qaadatay ifafaalehan, laakiin takhasuslayaasha ayaan ku talinayn in la raaco maadaama ay xadi karto asturnaanta qofka waqtiga aad bulshada ka dhigeyso.
Midkan ayaan u magacaabay maxaa yeelay waxaan u arkaa mid aad u cajiiba iyo sababta oo ah ereyo cusub ayaa la waafajiyay iyada oo ku saleysan fikirkaan. Waxay ku saabsan tahay sawirada laalaadayo gadaal dambe ee seenyada, waa la isticmaalaa #buttsofinstagram o #cheekyexploits ulajeeddo isku mid ah.
Noocyada hashtags-yada noocan oo kale ah waxay noqon karaan halis maadaama ficillo iyo dhaqammo cusub ay soo baxaan maalin kasta oo lagu qori karo kanaal. Sida aad aragtay waxaa jira caadiyado badan oo ixtiraam leh iyo weliba talo bixinno badan, oo loo garto inay ka kooban yihiin dadka waaweyn.
Markaad doorato sawir si aad u daabacdo Instagram wuxuu soo jeedinayaa miirayaasha 24 (way kala duwanaan kartaa maxaa yeelay waxay meesha ka saarayaan oo ay ku darayaan kuwa cusub) si ay dib ugu soo celiyaan qoraaladaada ka hor intaadan daabicin.
Fiidiyowgaan waxaad ku arki kartaa dhammaan Miirayaasha Instagram, in kasta oo aad rabto inaad ogaato astaamaha faahfaahsan ee shaandhada kasta iyo xaaladdee mid walbaa loo isticmaalaa, ka akhriso:
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso barnaamijyada kale shaandhaynta sawirrada onlaynka ah aad ayey ula mid tahay Instagram oo leh xulashooyin badan oo dib loogu soo bandhigi karo sawirradaada
Kuwani waa astaamaha shaandhayn kasta barta Instagram:
Sawirka asalka ah oo aan lahayn miirayaasha
Waxaan qaadi doonaa sawirkan tixraaca ah, kuwanu waa sawirada asalka ah iyada oo aan filter la isticmaalin. Waxaan u isticmaalay mid dhisme iyo mid dhulbahante leh qof, si aad sifiican uga dheehan kartaan farqi kasta oo ka mid ah:
Miirahaani waa mid ku habboon sawirada oo wuxuu soo ifbaxaa wax badan marka midabyadu ay jilicsan yihiin. Waxay siisaa midab buluug iyo guduud ah si loo wanaajiyo codka maqaarka oo abuuraya saameyn nololeed dheeri ah sawir qaadista. Iyada oo isbarbardhiga hoose uu jilicsanaado khafiifinta waxaana si aad ah loogu talinayaa in la qaato Naas.
Haddii aad leedahay sawir mugdi ah, filter Amaro waa ku habboon yahay in la dalbado. Kordhinta soo-gaadhista sawirka adoo iftiiminaya xarunta sawirka kuna dar dareenka buluuga ah, taa bedelkeeda, waxay lumisaa xoogaa isbarbar dhig ah.
Talo: haddii aad rabto inaad abuurto sawir nooca-nooca ah oo nooca loo yaqaan 'nooca kaararka' 'sidoo kale waa mid aad u wanaagsan.
Clarendon waa shaandhada ugu badan ee ay isticmaalaan dhamaan isticmaaleyaasha Instagram adduunka, waxay awood u leedahay inay sii wanaajiso sawirada maado kasta.
Waxay caan u tahay maxaa yeelay waxay u keentaa iftiin badan sawirka, wuxuu iftiimiyaa waxyaabaha ugu waaweyn wuxuuna xoojiyaa dhammaan codadka buluuga ah ee sawirka iyo hooska.
Iskuday oo waad arki doontaa sababta ay wali tahay tan boqorka shaandhooyinka instagram.
Filterka kareemka waxaa loo adeegsadaa sawirro dibedda ah iyadoo la abuurayo diiran / qabow saameyn ku yeelanaysa sawirka mid jilicsan oo kareem.
Gingham si tartiib ah ayuu u maydhayaa midabada isaga oo badalaya iftiinka sawirka, wuxuu u eg yahay saameynta riyada.
Filter Hefe wuxuu abuuraa codadka dahabka iyo jaalaha ah, xitaa haddii sawirku xoogaa xoogaa yar yahay. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu wanaajiyo midabada firfircoon ee sawirrada halkaasoo midabkiisu kala duwan yahay, tusaale ahaan, barkadda, ubaxyada iyo muuqaalka muuqaalka leh waxyaabo badan. Waxay aad ugu egtahay shaashadaha instagram-ka qaabka Lo-Fi.
Filterka Hudson wuxuu ku darayaa qabow dheeraad ah iyo dareen dheeri ah sawirka, wuxuu muujiyaa farqiga iyo hooska sawirkaaga. Haddii aad isku daydo inaad ku isticmaasho miiraha sawirka barkadaha ama sawirada xeebta waxaad arki doontaa sida ay ugu abuureyso qabow, qabow iyo saameyn adag muuqaalka.
Waxaa loo isticmaalaa sawirro badan oo ka kooban waxyaabo casri ah, qaab dhismeedka, gawaarida iyo waliba sawirro laga qaaday dibadda.
Inkwell waa shaandhayn isbarbar dhig ah oo adag iyo madow iyo caddaan. Waxaa loo adeegsan karaa sawirro leh iftiin liita iyo qarin hoos hadh ah, abuuraya saamayn duug ah ama haddii filterka Willow uusan adiga kuu shaqeyn.
Juno waa shaandhayn ay si weyn u isticmaalaan barayaasha, dhab ahaantii, waxaa loo tixgeliyaa kuwa ugu caansan 2º adduunka. Waxay hagaajisaa midabada buluugga ah iyo kuwa cagaarka ah, waxay sare u qaaddaa heerarka dhexe iyo kuwa gaduudka ah, waxayna u beddelaan codka codka qabow midab dhalaal leh.
Taasi waa, midab huruud, oranji iyo casaan ah waxay ku sii xoogeystaan ​​sawir. Waxaa si balaadhan loogu isticmaalaa iswada ahaanshaha iyo muuqaalka dhirta.
Filterka lark wuxuu qurxiyaa midabada casaanka wuxuuna xoojiyaa midabada cagaarka iyo buluuga ah isagoo ku daraya iftiin dheeri ah. Aad ayey waxtar ugu leedahay muuqaalka dhirta, wabiyada iyo kaymaha.
Miiraha Lo-fi wuxuu kordhiyaa isbarbardhiga iyo buufiska, iyo hadhka ayaa sii xoogeysan doona. Samee kaamirooyinka tayada liita. Waxaa si aad ah loogu talinayaa sawir kasta oo cunto iyo cunno ah guud ahaan.
Miiraha Ludwig wuxuu kordhiyaa iftiinka sawirka wuxuuna si tartiib ah u xidhaa midabada. Waxaa lagu talinayaa in loo isticmaalo farshaxanka, sawirada ugu yar, sawirrada iyo qaababka joomatari.
Filter filter-ka Dayaxu wuxuu u eg yahay Gingham, laakiin qaabkiisa madow iyo caddaan, natiijada u dambaysa waa sawir leh nal iftiin jilicsan.
Filterka Mayfair wuxuu leeyahay taabasho midab casaan ah waxayna u muuqataa inay saameyn ku leedahay muuqaalka sida haddii ay aheyd sannadihii 50. Waxaa soo muuqday raaligelin ay ka heleen kooxda Instagram.
Filterka Nashville wuxuu abuuraa taabasho diiran oo raaxo leh sawiradaada. Waxay leedahay casaan dhan oo casaan ah oo sii kordhinaya saameynta. Waad u isticmaali kartaa inaad ku siiso cod baahi iyo noloshii hore oo sawirkaaga ah.
Shaandhaynta Joogtada ahi waxay kordhisaa codadka jaalaha, cagaarka iyo buluuga ah ee sawirka, sida inay tahay muuqaal muuqaal ahaan u buuxa. Waa wax weyn in loo adeegsado sawirro dibedda ah, haddii aad isku daydid xeebta waxyeelladu way ka sii muuqan kartaa.
Miiraha 'Reyes filter' wuxuu sifeeyaa midab kasta isagoo abuuraya saamayn kuleyl leh oo leh iftiin dheeri ah. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa sawirro hore iyo sawirro duug ah.
Filter Rise wuxuu bixiyaa milicsiga sawirka iyo iftiinka jilicsan ee xarunta, wuxuu jilciyaa qayb kasta wuxuuna u beddelaa midabada kareemada iyo jaalaha. Waxay u eg tahay in iftiinka ugu horreeyay ee maalinta uu sawirka ku laayay si diiran.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu jilco maqaarka isla markaana taabasho cusub loo siiyo sawir maalinle ah.
Sheegista shaashaddu waxay iftiimineysaa sawirrada iyadoo ku dareysa iftiinka bartamaha waxayna ku sameyneysaa shaashad gees walba. Codso codadka huruudda ah ee abuuraya saameyn diiran sawirka.
Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa sawirada muuqaalka, dibedda iyo in la abuuro saameyn deggan oo deggan.
Sida magacu u muuqdo (hibernate ama hurdo) filter slumber wuxuu dejiyaa midabada wuxuuna abuuraa saameyn iftiin leh. Waxay noqon doontaa wax la mid ah saameyn riyo, retro ama xitaa melancholic.
Filterka Valencia wuxuu iftiimiyaa sawirka midab diiran oo dhalaalaya. Codadyadan diiran ayaa ka dhigaya muuqaalka inuu leeyahay canab iyo saameyn duug ah (nooca 80 sano), sawirradu waxay u muuqdaan kuwo la maydhay, laakiin waxay hayaan tayada asalka ah.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa sawiro leh codad pastel ah iyo midabo jilicsan, hubso in la wanaajiyo.
Shaandhada willow waxay abuurtaa qiyaasta midabka cawlan (madow iyo caddaan) laakiin midabada madow waxay u badan yihiin sida cawlan iyo caddaanku waa midab kareem. Waxaa loo adeegsadaa gawaarida, alaabta guryaha, wejiyada, dabiicadda, naqshadaha, muuqaalka dhulka iyo magaalada dhexdeeda.
Sidoo kale waa mid aad u faa'iido badan leh 'selfie edie' iyadoo aan noqon saafi madow iyo caddaan ah, shaashadani waxay kor u qaadeysaa midabada leh saameyn cajiib ah.
Shaandhada X Pro II waxay sii xoojineysaa midabyo badan oo sawirka ku jira iyagoo abuuraya saameyn diiran oo firfircoon. Waxay u muuqataa sidii in sawirraduhu ahaayeen kuwo firfircoon oo firfircoon.
Waxaa si buuxda loogu isticmaali karaa gudaha, sawirrada dibedda, si loo muujiyo midabada iyo sawirrada tayada leh.
Sida miirayaasha cusub ee Instagram ay u muuqdaan, waxaan ku cusbooneysiin doonaa qaybtaan.
Sidee loo xiraa lambar Telegram